မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ | မျိုးမြန်မာ
Posted by myomyanmar on July 2, 2014
Posted in: ဗုဒ္ဓဘာသာ, ဘာသာရေး.	Tagged: ဗုဒ္ဓဘာသာ, မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာ, Myanmar.	Leaveacomment
မြန်မာနိုင်ငံတော်သို့ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ရောက်ရှိခဲ့သောအချိန်ကို ရှေးဟောင်းမှတ်တမ်းများအရ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပါတလိပုတ်ပြည့်ရှင် သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးနန်စံချိန် သာသနာသက္ကရာဇ်(၂၃၆)ခုနှစ်ခန့် အချိန်တဝိုက်ကဟု ရည်ညွှန်းဖေါ်ပြကြသည် သီရိဓမ္မာသောက မင်းကြီး၏ တတိယသံဃယနာတင်ပွဲကျင်းပပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်း သုဝဏ္ဏဘုမ္မိဒေသသို့ သောဏနှင့် ဥတ္တရမထေရ်မြတ်နှစ်ဦး ဦးဆောင်ကာ ကြွရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်
ထိုမထေရ်မြတ်နှစ်ပါးသည်သုဝဏ္ဏဘုမ္မိသထုံမြို့ကိုဗိုပြု၍ရာမညဒေသတစ်ဝှမ်းလုံး၌ထေရဝါဒ အခြေခံအုတ်မြစ်ချပေးခဲ့ရာ ရာမညဒေသတွင် ဗုဒ္ဓသာသနာ အလင်းရောင် ရောင်ဝါနေသို့ ထွန်းလင်းခဲ့သည်
ထို့အတူ ဗုဒ္ဓသာသနာသည် ပျူတို့နေထိုင်ရာ ဗိဿနိုး သရေခောတ္တရာသို့ ရာမညဒေသနှင့်မရှေးမနှောင်းပင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး အေဒီ (၄)ရာစုတွင် စည်ပင်တိုးတတ်နေပြီဖြစ်သည်
ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်ရှိပြီး (၈)ဝါမြောက် မဟာသက္ကရာဇ်(၁၁၁)ခုနှစ်တွင် ရဟန္တာ(၅၀၀) ခြံရံပြီးသုဓမ္မဝတီ သထုံပြည်ကို ကြွရောက်ခဲ့ခြင်းရှိသည်ဟုလည်းဖေါ်ပြကြသည်
ထို့ကြောင့် အချို့သူများဆိုသကဲ့သို့ အနော်ရထာမင်းတရားလက်ထက်မှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဗုဒ္ဓဘာသာရောက်ရှိလာသည်ဆိုခြင်းမှာ အလွန်မှားယွင်းပါသည် သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ သထုံပြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံထဲ၌ပင်တည်ရှိပါသည်
ပုဂံကိုအခြေပြု၍ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့သော်လည်း သထုံပြည်သည် မြန်မာပြည်ပင်ဖြစ်ပါသည်
သာသနာတော်ပခြေတည်ပြီးနောက် ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားလာရာ သုဓမ္မဝတီမြို့သည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ကမ္ဘောဒီးယား ထိုင်း လာအို စသည့်ဒေသများမှ ရဟန်းများပင် လာရောက်စာပေ သင်ကြားပို့ချခဲ့ရာ အချက်အချာဒေသဖြစ်လာခဲ့ပါသည်
သို့သော်ထိုအချိန်တွင်ဗုဒ္ဓဘာသာသည် မဟာယာန ဟိန္ဒူ ရှေးဟောင်းအစွဲအလန်း နတ်ကိုးကွယ်မှုနှင့်ရောနှောလျက်ရှိရာ ထေရဝါဒ အစစ်အမှန်ဟုမဆိုနိုင်သေးချေ
(၁၁)ရာစု ပုဂံတွင်နန်းတတ်သော အနုရုဒ္ဓါခေါ် အနော်ရထာမင်းလက်ထက်မှပြောင်းလဲ သွား၍စစ်မှန်သော ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားခဲ့ပါသည်
အရှေ့တောင်အာရှ ကျွန်းဆွယ် တစ်ခုလုံးကို ဘာသာရေးနည်းဖြင့် လွှမ်းခြုံညီညွတ်စေပြီး မဇ္ဈိမနှင့် တရုတ်ပြည်ကို ရင်ဆိုင်နိုင်သည့် ဗုဒ္ဓဝါဒီတို့ ၏တန်ခိုးအရှိန်အဝါကြီးမားလှသော ဧကရာဇ်နိုင်ငံတော်ကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီး အနော်ရထာမင်းသည် သီရိဓမ္မာသောကမင်းပြီးလျှင် ဒုတိယ အရှိန်အဝါ အကြီးမားဆုံး သာသနာပြုဒါယကာ မင်းတပါးဖြစ်ခဲ့သည်
ဗုဒ္ဓကိုယ်တော်သည် ဘုရားအဖြစ်ရောက်ရှိပြီးနောက် (၃၁)ဘုံသား ဝေနေယျ သတ္တဝါတို့ကို ကယ်မခဲ့ပါသည်
ဗုဒ္ဓသည် သာ သတ္တဝါတို့အပေါ် ကယ်မခြင်း တရားဟောခြင်းမပြုပဲ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခဲ့လျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ပေါ်ပေါက်လာစရာ အကြောင်းမရှိပါ ထို့အတူ သီရိဓမ္မာသောကမင်း အနော်ရထာမင်းကဲ့သို မင်းကောင်းမင်းမြတ်များကသာ သာသနာမပြုခဲ့ပါက ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ယနေ့ကဲ့သိူ့ ထွန်းလင်းတောက်ပအံ့မထင်ပါ
ခောတ်အဆက်ဆက်တွင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို လေ့လာလိုက်စားသူများစွာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ရာ ပုဂံခောတ်၌ပင် ကျစွာမင်း သံပျင်မင်းသမီးကဲ့သို့ ကျမ်းပြုသူ ပရိယတ္တိ စာပေပို့ချသူများပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်
ရှင်အရဟံ ပံ့သုကူမထေရ် ဆပဒ မထေရ်တို့ဖြစ်ပါသည်
ဤသို့ခောတ်အဆက်ဆက်ဖြတ်သန်းခဲ့ ရာ ပင်းယ ညောင်ရမ်း အင်းဝ ဟံသာဝတီ ကုန်းဘောင် ကိုလိုနီခောတ် လွတ်လပ်ရေးခောတ် များသို့ရောက်ရှိလာရာ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် အရှိန်အဝါပိုမိုတောက်ပခဲ့ပြီး အရေးပါလှသော သာသနာပြု လုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရပါသည်
ကျနော် ကို အချို့ သူများက ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်ထားတဲ့ခံယူချက်မှားနေတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်
ကျနော့် ခံယူချက်ကတော့ ကိုယ်စွမ်းသလောက် တတ်နိုင်သလောက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို လူများများသိစေချင် နားလည်စေချင်ပါသည်
ဗုဒ္ဓဘာသာသည် လူသိမခံဝံ့သည်ဘာသာ ကြမ်းတမ်းသောဘာသာမဟုတ်ပါ
ဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင”်ဧဟိပဿိကော ”ဟူ၍ ဖိတ်ခေါ်ထားပါသည်
ထို့ကြောင့် ကျွန်နော် လက်ရှိ တင်သော status များ ဆွေးနွေးသော comment များသည် ဘာသာခြားများကို နှိမ်လို ၍မဟုတ်ပဲ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ယှဉ်၍ အကောင်းအဆိုးခွဲခြားနိုင်စေရန် မျက်လုံးပိတ်မယုံကြည်တတ်စေရန်သာဖြစ်ပါသည်
ထို့ကြောင့် ကျတော် ၏ တင်သမျှ ဘာသာရေး post များကို သာသနာပြုသည်ဟုသာ ခံယူထားပါသည်
သိုသော် ပါရမီ နုသည့်အတွက်အမှားရှိနိုင်ပါသည်
← မဆီမဆိုင်မြန်မာကို ဂျီဟပ်လုပ်မယ်တဲ့
အကောင်းဆုံးခံစစ် (ဂျီဟာဒ်) →